उपनिर्वाचन, व्यर्थैको बोझ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
उपनिर्वाचन, व्यर्थैको बोझ
२०७१ बैशाख २४, बुधबार ०१:३९ गते
पत्रकार मित्र राजेश घिमिरे भन्दै थिए– ‘संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन एक जुगमा एक पटक आउँछ भन्दै थिए, तर त्यही संविधानसभाका लागि छ वर्षको बीचमा मैले त तीन–तीन पटक भोट हाल्न पाउने भएँ ।’ पहिलो संविधानसभा संविधान नै नबनाई अन्त्य भयो । दोस्रो संविधानसभा पनि सम्पन्न भएको छ महिना नाघ्न लाग्दै छ । चितवन क्षेत्र नं ४ का मतदाता राजेशले भने यी दुईका अलावा आउँदो असार ८ मा पनि मतदान गरेर संविधानसभा निर्वाचनमा मतदानको ह्याट्रिक गर्दैछन् । तर, यो ह्याट्रिकभित्र आनन्दभन्दा दिक्दारी मिसिएको छ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं ४ बाट विजयी नेपाली कांग्रेसका सभापति देशकै प्रधानमन्त्री भए । कोइराला चितवनका साथै बाँकेबाट पनि उठेका थिए । त्यहाँ पनि उनी विजयी भए । दुई ठाउँबाट जितेकाले एउटा क्षेत्र छाड्नुपर्छ । चितवनमा पाहुना बन्न आएका कोइरालाले गृह जिल्ला बाँकेको क्षेत्र रोजे, यहाँको छाडे । निकटतम प्रतिस्पर्धीभन्दा दोब्बर मत दिएका थिए कोइरालालाई, चितवन क्षेत्र नं ४ का मतदाताले । तर, यहाँका मतदाताले कोइरालालाई हाम्रो क्षेत्रको मान्छे भनेर गर्व गर्न नपाउने भए । अब उनको साटो अर्कैलाई चुन्नुपर्ने बेला सामुन्ने आएको छ ।
कांग्रेसका कोइराला र शेरबहादुर देउवा तथा एमालेका माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमले दुई–दुई ठाउँबाट चुनाव जिते । उनीहरुले छाडेको एक–एक निर्वाचन क्षेत्रमा आउँदो असार ८ गते फेरि मतदान हुँदैछ । दुई ठाउँबाट उठेका वरिष्ठ नेताहरुका कारण यो पटक देशका चार क्षेत्रमा उपनिर्वाचन
हुँदैछ । यसरी हुने उपनिर्वाचनप्रति सायदै कोही सकारात्मक होलान् ! मुख्य निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसमेतले यस्तो उपनिर्वाचनप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । यस्तो उपचुनाव नहोस् भन्नका लागि नेताहरु एक ठाउँबाहेक अर्को ठाउँबाट उठ्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
चितवनमा हालै भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उप्रेतीले ऐनमै एकभन्दा बढी क्षेत्रबाट उठ्न नपाइने व्यवस्था राख्न कोसिस गरेको खुलासा गरे । अर्थात्, निर्वाचन आयोग नै यस्तो खालको उपनिर्वाचनको विपक्षमा रहेको देखिन्छ । खर्च र क्षेत्रगत प्रतिनिधित्वका नजरले निर्वाचन आयोग उपनिर्वाचनको खिलाफमा रहेको उप्रेतीले बताएका छन् । एक क्षेत्रमा हुने उपनिर्वाचनको खर्च झन्डै एक करोड रूपैयाँ हुन आउँछ । यो खर्च निर्वाचन आयोगले गर्ने मात्रै हो । उम्मेदवारबाट हुने बेहिसाब खर्चको त लेखाजोखा नै छैन ।
खर्चपछि अर्को मह¤वपूर्ण विषय प्रतिनिधित्व नै हो । चितवन क्षेत्र नं ४ अहिले प्रतिनिधिविहीन छ । कम्तीमा असार ८ गतेसम्म यो अवस्था कायम रहने छ । नेताहरुले आउँदो माघभित्र संविधान जारी गर्छौं भनेका छन् । यो हिसाबले गणना गर्ने हो भने त आउँदो संविधानमा चितवनको क्षेत्र नं ४ का मतदाताको प्रतिनिधित्व जम्माजम्मी सात महिना मात्रै हुने भयो, अर्थात् संविधान निर्माणमा यहाँको सहभागिता पूर्ण हुने भएन । सबैको पूर्ण प्रतिनिधित्व र भावना समेट्ने भनेर संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्न लागेको मुलुकमा कुनै क्षेत्रलाई यसरी प्रतिनिधिविहीन बनाउन नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । तर, नेताले यतातर्फ विचारै पु¥याएनन् ।
चुनावमा चुनिन्छु भन्ने पक्का नभएपछि एक जना नेता एकभन्दा बढी क्षेत्रमा हाम फाल्ने हुन् । ढुक्क हुन नसक्ने नेताका कारण देश र जनताले यस्तो मूल्य चुकाउनु परेको छ । यो पटक वरिष्ठ नेताहरु कोइराला, देउवा, नेपाल र गौतमसहित माओवादीका प्रचण्ड र एमालेका झलनाथ खनाल दुई ठाउँबाट उठेका थिए । तर, प्रचण्ड र खनालले एक–एक क्षेत्रमा पराजय बेहोरे । अरु वरिष्ठ नेताहरु दुई ठाउँबाट निर्वाचित हुँदा बजेटको बोझ र प्रतिनिधिको रिक्तता कायम हुन
पुगेको हो । उपनिर्वाचनको औचित्यमाथि मतदाताले नै प्रश्न खडा गर्न थालेका छन् ।
मतदाता पनि चाहन्छन्, यसरी उपनिर्वाचन नहोस् । यसका लागि के व्यवस्था गर्ने हो, दलहरुले सोचविचार गर्नुपर्ने उनीहरुको आग्रह छ । क्षेत्र नं ४ कै मतदाताहरु यसबारे बहस, छलफल गरेको भेटिए । मतदाताहरुको चाहना के पाइयो भने नेताहरु एकभन्दा बढी क्षेत्रबाट सकेसम्म उठ्दै
नउठून् । उठ्नै परे, यो उपनिर्वाचनको बोझ नबोक्न पर्ने व्यवस्था कानुनमा होस् भन्ने मतदाताहरुको माग रहेको पाइयो । त्यसका प्रावधानहरु के–के होलान्, मतदाताहरुले नै विकल्प सुझाएका छन् ।
मतदाताले दिएका केही विकल्पहरु यस्ता छन् । उनीहरु भन्छन्– जुन पार्टीले जित्यो, त्यसैको अर्को कसैलाई दिए भयो । तर, यसो गर्दा जनताबाट निर्वाचित हुने प्रावधानको विरूद्ध हुन्छ । त्यसो भए के गर्ने त ? मतदाताको मत छ, दुई ठाउँबाट उठ्दा निर्वाचनकै बेलामा वैकल्पिक उम्मेदवार पनि तय होस् । मानिलिऊँ, सुशील कोइराला दुई ठाउँबाट उठ्ने भए । निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा उनले दुवै ठाउँमा आफ्ना वैकल्पिक उम्मेदवारहरु पनि तोकेर मतदाताको बीचमा जानुपर्ने व्यवस्था कानुनी तवरमै गरे यो उपनिर्वाचनको बोझ उठाउनु पर्दैन थियो, क्षेत्र छोड्दा वैकल्पिकले पाउँथ्यो ।
यसरी जाँदा कानुनी र व्यावहारिक समस्या देखिँदैन । तर, पार्टीभित्र केही समस्या भने देखा पर्ने छ । पार्टीको समस्या व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देशलाई बोझ वास्तवमा भएको यही हो । त्यसो त, सुशील कोइराला चाहेर चितवन आएका होइनन् । कांग्रेसका लागि अनुकूल मानिएको क्षेत्र नं ४ मा उम्मेदवार हुन एकभन्दा अत्यधिक कांग्रेसजनहरु इच्छुक भएपछि जिल्लाकालाई उठाउँदा विवाद बढ्ने र कांग्रेसको हातबाट क्षेत्र फुत्कने निष्कर्ष निकालेर सुशील यहाँबाट उठेका हुन् । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई त्यस्तै भएको थियो ।
पहिलो पटक बाँकेबाट पराजित सुशील चितवन आए सुरक्षित हुने ठाने । चितवनका नेताले पनि मजबुत क्षेत्रमा सुशील आए जित निश्चित हुने ठानेर स्वागत गरे । अर्थात्, सुशीलको उम्मेदवारी नेता र पार्टीको मह¤वाकांक्षाको परिणाम थियो । जुन मह¤वकांक्षाले देशको व्ययभार त बढायो–बढायो, क्षेत्रलाई पनि प्रतिनिधिविहीन बनाउन भूमिका
खेल्यो । उपनिर्वाचनको झन्झट बेहोर्न नचाहेका मतदाताको मत बुझेर निर्वाचन आयोगले कडा कदम चाल्न आवश्यक छ । किनकि, निर्वाचन आयोगले यो कुरा पहिले नै बुझेको प्रमुख उप्रेतीले बताइसकेका छन् । नेता र पार्टी पनि तयार हुनुप¥यो, यो कामका लागि ।